"Meel walba oo uu kufsi ka dhaco Soomaaliya, malaga waalan yahay?" - BBC News Somali
Image caption Kufsiga loo geysto gabdhaha yar yar ayaa kusoo badanaya deegaannada Soomaaliya
Iyadoo falalka kufsiga ay muddooyinkan kusoo badanayaan deegaannada kala duwan ee Soomaaliya ayaa haddana la hadal hayaa xiriirka ka dhaxeeya tacaddiyada noocaas ah iyo xanuunka dhimirka.
Waxaa isasoo taraya wararka ku saabsan in qaar ka mid ah dhibbaneyaasha kufsiga ay waxyeello ka gaarto dhimirka, halka kuwo kalena la sheego in iyagoo xanuunka dhimirka qaba ay kufsi geystaan.
Falkii ugu dambeeyay ee kufsi ah ayaa Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, iyadoo horayna kuwo noocaas ah looga soo tabiyay magaalooyin kale.
Gabar yar oo 9 jir ah ayaa la kufsaday, taasoo iminka xaaladdeeda caafimaad walaac laga muujinayo.
Saabiriin Maxamed Xasan ayey dadka qaar sheegayaan inay 8 jir tahay.
Laakiin warar durbadiiba soo baxay ayaa sheegay in ninka falkaas geystay uu yahay qof dhimirka ka xanuunsan, inkastoo aan wali gacanta lagu soo dhigin, dhakhtarna uusan xaqiijinin arrintaas.
Balse waxaa qodobkaas ku gacan seyray mas'uuliyiinta deegaanka oo ku raad jooga dadkii ku lug lahaa dhacdadaas.
"Kulligood ba kufsada oo cashar u dhiga" : Fadeexad ka dhacday jaamacad Ingiriiska ku taal
Amiirkii boqortooyada Sacuudiga ee 'faroxumeynta' kula dhaqaaqay ciyaartoy caan ah
Maxaa lagu soo af jaray murankii ka taagnaa Xeerka kufsiga ee Somaliland?
Guddoomiyaha degmada Buulobarde Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Duurow, oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay dhankooda aysan aaminsaneyn sheekada ku saabsan in ninka gabdha kufsaday uu dhimirka ka xanuunsan yahay.
"Waxaan waa fidno kale oo dalka kusoo biirtay, kufsigu meelo badan ayuu ka dhacay, ma dhihi karnaa meel kasta waa laga waalan yahay?, waan baareynaa ilaa ay noo caddaatana ma aamineyso taas", ayuu yidhi Guddoomiyaha.
Gabdhaha la faro xumeeyo oo ay dhimirka waxyeello ka gaarto
Image caption Dumarka Kufsiga la kulma qaarkood ayaa wajaha xanuunka dhimirka
Dhanka kale waxaa jira in meelo badan oo ka mid ah dunida laga soo tabiyay in gabdhaha iyo carruurta yar yar ee tacaddiyada galmada loo geysto ay soo wajahaan cudurrada dhimirka.
Daraasad horay looga sameeyay UK ayaa lagu sheegay in dhibaneyaasha dambiyada ee xanuunka dhimirka qaba la iska illoobay.
Dadkaas ayaa xitaa la sii bartilmaameedsadaa marka ay xanuunnadaas ku dhacaan ka dib, mana jirto cid u istaagta inay dhibkooda wax ka qabato.
Daraasaddan ayaa lagu qeexay in gabdhaha la kulma tacaddiyada galmada uu soo food saaro culeys ku saabsan sidii looga rumeysan lahaa wixii ku dhacay.
Qaarkood ayaa la sheegay in marka ay booliska dacwaddooda geystaan lagu gacan seyro, oo iyaga qudhooda eedda la saaro.
361 ruux oo ka mid ah dadka cilmi baaristan lagu wareystay ayaa sheegay in lagu beeniyay markii ay tabiyeen weerarro kufsi ah oo loo geystay.
Qaar ka mid ah gabdhihii sida foosha xun tacaddiyada loogu gaystay.
Maxkamadda degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ee Maamulka Galmudug ayaa xukun ku riday afar nin oo dhalinyaro ah oo horaantii sannadkan gabadh kufsi ugu gaystay isla degmadaas.
Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii ee ay Soomaalida dagto ayaa bishii Febraayo waxaa lagu kufsaday laguna jirdilay gabadh 13 sano jir ah.
Ismahaan ayaa 'si arxan darro ah' loogu dilay guriga eedadeed oo ay la noolayd.